Aniga oo ah (gabar, 15 sanno jir ah) waxaan jeclahay in aan aado Oktoberfest ee ku taala Munich sannadkan. Anigu weligayga meesha ma tagin! Maxaan u baahanahay in aan oggaado? – Tips for refugees
Previous Previous post: Aniga oo ah (gabar, 17 jir ah) shalay ayaan cabay khamro. Kadibna wiil saaxiib ah ayaa iga taabtay naasaha, kadibna lugahayga dhexdooda. Anigu ma doonayo in uu i taabto. Laakiin waxba ma dhici karo maadaama ay igu adagtahay in aan arintaasi ka hadlo. Saaxiibadayda gabdhaha ahi waxay dhahaan: midaasi waa waxa kugu dhaca marka aad cabtid khamro. Khalad miyaan ku leeyahay arintaasi?
Next Next post: Anigu waxaan ka imid dalka Suuriya waxaana ku noolaa meel deganaansho ah sannad iyo bar (waxaan ahay gabar, 15 sanno jir ah). Waxaan aad ugu xiisay dalkaygii mararka qaarna waxaan dareemaa murug. Qofkee i caawin kara? Anigu ma doonayo in aan cidna culeys saaro.